Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Costa Rica » Ebe ezumike 5 kacha elu maka 2018
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ gbasara Costa Rica • Akụkọ kacha ọhụrụ na Iceland • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime 11% nke ndị America na-emefu nkwụghachi ụtụ na 2018 na a ezumike na chọrọ ụfọdụ mmụọ nsọ maka gị ọzọ njem, mgbe ahụ, ma eleghị anya, ị ga-achọ tụlee ụfọdụ nke ebe depụtara n'okpuru. Oge agabeghị ahazi oge ezumike gị kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ obi ụtọ na-achọ na Costa Rica ma ọ bụ meandering site akụkọ ihe mere eme n'okporo ámá na Portugal, na-amalite afọ ọhụrụ site na-eme atụmatụ gị ọzọ ịmalite ịhụ ụfọdụ mma nlegharị anya na-enwe ịtụnanya ahụmahụ.
Ọ bụghị naanị na Mexico nwere ụfọdụ ebe dị egwu, osimiri mara mma, obodo Mayan na ọzara ọzara mara mma, ọ bụkwa ebe dị mfe iji gaa na mmefu ego nyere ọnụego mgbanwe ugbu a. Ọ bụrụ na ntụrụndụ osimiri ma ọ bụ ihe ndị dị n'oké ọhịa abụghị ihe gị, gaa n'obodo ahụ na-ekpo ọkụ nke Merida, Mexico City ma ọ bụ Oaxaca maka ọdịbendị, akụkọ ihe mere eme na ụfọdụ nri nri ọnụ ha.
Site na ezumike ezinụlọ dị n'ime ime obodo gaa na nke izu na London, ịnụ ụtọ ezumike na-enweghị nrụgide na-eme nke oma na UK. Ma ị na-ahọrọ Cornwall n'akụkụ ọdịda anyanwụ ma ọ bụ Ọdọ Mmiri Mmiri dị n'ebe ugwu, ịma mma ime obodo ya ga-ahapụ gị ịma mma. Obodo maara ihe, ọ bụghị naanị London na-adọta ndị njem: Bristol, Leeds ma ọ bụ Manchester na-akwụsi ike na maapụ ahụ dịka ebe dị egwu iji gaa.
Obere ala a nwere ike ịbụ otu n'ime ọtụtụ ụdị dị iche iche dị na mbara ụwa anyị nwere oke mma dị egwu nke sitere na ụsọ mmiri ruo n'oké ọhịa mmiri, ahịhịa mangrove na ugwu mgbawa. Ebe njem njem njem gburugburu ebe obibi ị ga-enwe nnwere onwe ịga njem n'oké ọhịa mmiri ozuzo oge ochie ma ọ bụ jiri mmiri dị na Tortuguero National Park wee bịaruo anụ ọhịa nso.
Nọdụ n'elu ugwu mgbawa ọkụ, Iceland na-egosi ịbụ ebe ama ama nyere ọmarịcha ọhụụ nke Northern Light nke kachasị mma na February. Mgbe ị nọ ebe ahụ, gaa na Blue Lagoon a ma ama, Seljalandsfoss nsụda mmiri, Eyjafjallajökull ugwu mgbawa na aja ojii na Vik osimiri. Mgbe ị nyochachara glacier anwansi ha ma gbanye mmiri n'otu n'ime iyi mmiri, chọpụta isi obodo ya, Reykjavík.
Nke a nwere ike ịbụ obere obodo, na-elegharakarị Spain ma ọ bụ Italytali anya, mana njem nlegharị anya Portugal na-aga n'ihu ugbu a ma gosipụta njedebe na-akwụsịlata. Ewezuga isi obodo ya, Lisbon, nke abụọ, ma gbagote na ugwu obodo, Porto na-enwetakwa aha ọma. Tụfuo ụfọdụ osimiri mara mma na Algarve, nnukwu ụlọ ochie na saịtị UNESCO World Heritage nke Tomar ma ọ bụ Batalha, na nnukwu njem na-echere gị.